Kahor soo bandhigideeda rasmiga ah, Amazon waxay iibineysaa Moto Z4 | Androidsis
Maaha markii ugu horreysay, mana noqon doonto markii ugu dambeysay, in dukaan weyn waxay iibiyeen qalab aan wali si rasmi ah suuqa loogu soo bandhigin. Kiiskii ugu dambeeyay, Amazon, waa weyn oo iibka khadka tooska ah ah oo kormeerku dhigay iibinta Mareykanka gudaheeda Moto Z4, terminal aan weli si rasmi ah loo soo bandhigin.
Isticmaalaha xariifka ah wuxuu fursad u helay inuu dhigo amarka, amar uu isagu aakhirkii helay taasna waxay noo saamaxday inaan xaqiijino taas oo qeexitaankeedu yahay terminalkan cusub iyada oo loo marayo dib u eegistiisa. Halkan waxaan ku tusaynaa dhammaan tilmaamaha Moto Z4 cusub.
Gudaha Moto Z4 waxaan ka helaynaa processor-ka Qualcomm Snapdragon 675, processor 8-core ah oo uu weheliyo kaarka sawirada ee Adreno 608. Waxaa lagu heli karaa labo 4 iyo 6 nooc oo RAM ah, sida booska keydinta gudaha, oo laga heli karo 64 iyo 128 GB. Shaashadda terminal-kaani wuxuu gaarayaa 6,4 inji oo leh xallinta Full HD +, waa guddi OLED ah wuxuuna leeyahay saamiga shaashadda 19: 9.
Batariga Moto Z4-ka cusub, wuxuu gaarayaa awoodda aan laga fiirsan 3.600 mAh, ku habboon sida la filayo, iyadoo si dhakhso leh loogu soo oogayo oo na siineysa madax-bannaanid fara badan maalin dhan oo firaaqo ama shaqo ah. Waxaa ka mid ah xeedho 15w ah sidoo kale waxay la jaan qaadi kartaa lacag-bixinta degdegga ah.
Cusboonaysiinta ugu weyn ee xaruntan cusub, waxaan ka helnay moduleka kaamerada ee ay soosaareyso shirkada Sony taasina waxay gaaraysaa 48 mpx, oo leh furitaan f / 1.6, taas oo noo oggolaaneysa inaan soo qaadno sawirro mahadnaqa 12 mpx Quad Pixel technology. Kaamirada hore waxaa ku jira 25 mpx shidma leh furitaan f / 1.9 ah. Labada kamaradoodba waxay dhexgalaan Sirdoonka Artifishalka si loo hagaajiyo natiijada kama dambaysta ah ee qabashada.
Qiimaha terminaalka ee fursad u helay inuu helo Moto Z4 wuxuu ahaa $ 499 oo lagu daray qaybta Moto 360 oo bilaash ah. Ma garanayno haddii isla dhiirrigelintani ay iman doonto Yurub ama waxaan awoodi doonnaa oo keliya inaan iibsanno boosteejada iyada oo aan lahayn Moto Mods caan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Kahor intaan si rasmi ah loo soo bandhigin, Amazon waxay iibineysaa Moto Z4
Sida loo ogaado haddii Instagram hoos u socdo